Mamy mofomamy marevaka , mamy ary mamy be dia be - ny vokany dia tsy vitan'ny lolo, fa mahasoa ihany koa. Avy eo dia manamboatra fanafody, mangatsiaka sy mitazona ny ravina ao amin'ny endrika maina. Mazava ho azy, ny tranokely vitaminina toy izany dia ilaina fotsiny mba hanana ny tranokalanao. Ary ny ronono dia nahomby tamin'ny ririnina ary ny taona nanaraka dia nanome vokatra faran'izay tsara, tsy maintsy voaomana tsara amin'ny ririnina, indrindra indrindra, mba hikombona. Momba ny fomba hanapahana ny kibon'ny ronono araka ny tokony ho izy ary horesahina ao amin'ny lahatsorantsika.
Ilaina ve ny manapaka ronono amin'ny fararano?
Ilaina ve ny manaisotra ny akorandriaka eny amin'ny lohataona sa mahavita velona amin'ny ririnina amin'ny endrika tsy voaongana? Izany rehetra izany dia miankina amin'ny taonan'ny kirihitr'alona - raha vao nambolena vao haingana ny fihinanan-kena ary tsy mbola natanjaka kokoa ny tifitra, tsara kokoa ny tsy manapaka azy amin'ny fianjerany. Ho an'ny fotoana sisa tavela mialoha ny hatsiaka dia hihalehibe kokoa ny kirihitra, hihamatanjaka ary ho voatsinjara amin'ireo sakafo mahavelona amin'ny fahavaratra. Amin'ny toe-javatra hafa, mila mihintsana ny fihombom-bary, ary tsy misy alahelo hamongorana ireo zavatra tsy ilaina.
Ny fehezan-kavoana mofomamy maniry amin'ny fararano
Noho izany, rahoviana no tokony hatao amin'ny ririnina ny fanangonam-bokatra fambolena? Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto Aza maimaika, ary manodinkodinkodinkodina ireo andro ireo rehefa manomboka manja ny ravina fotsiny ny fararano, ary mitazona amin'ny marika tsara ny mari-pana. Ny fiomanana ny fihinanan-kena amin'ny ririnina, indrindra fa ny fisakanana, dia tsy atao afa-tsy amin'ny faran'ny volana oktobra na voalohandohan'ny volana novambra, rehefa misy mangatsiatsiaka ny andro.
Fomba fanesorana ny fihinanan-kena
Inona no tafiditra ao amin'ny fandrobana ny akorandriaka amin'ny ririnina? Voalohany indrindra - ny fanesorana ireo ampahany marary sy maty rehetra ao anaty kirihitra, izay tsy misy dikany ny fotony. Tena zava-dehibe tsy misy hatak'andro aorian'ny fiafaran'ireo asa fanodikodinam-bola hanangonana ny fako rehetra ao anaty antontam-bidy sy fandoroana. Tsy hanome endrika ivelany fotsiny ity tranonkala ity, fa hanampy koa ny hanimba ny bibikely miaina amin'ny henomamy.
Ny fambolena vary ho an'ny ririnina dia mety amin'ny fomba maro, ny iray amin'izany dia dingana roa raha araka ny nambaran'i Sobolev. Na dia io fomba fanesorana ny fihinanan-kena io aza dia tena mahavariana tokoa, fa ny fandaniana rehetra dia tsy mihoatra noho ny valisoa amin'ny vokatra be dia be amin'ny taona manaraka. Ny fototry ny fandrobana indroa dia ny manongotra ny fotsy maniry amin'ny lohataona. Nefa tsy ny ronono rehetra akory no mitifitra, fa ny zava-misy ihany fa tamin'ny fotoana nisian'ny fandrosoana dia nahatratra haavo mihoatra ny 100 santimetatra. Nandritra ny fahavaratra dia nihinana tambabe ny fivarotam-panafody ary namolavola tapa-bolana maro. Rehefa ririnina ny fararano, dia ny ririnina indrindra amin'izy ireo sisa tavela amin'ny ririnina, mba hanapaka indray ny tampony indray amin'ny 15-20 cm amin'ny lohataona. Noho izany, izy ireo dia mahatratra ny fananganana bozaka mahery sy zaridaina izay manome be dia be. Mandritra ny famoahana ny lohataona, ny kirihitra dia kendrina, manala ny tavy malemy. Ny fomba faharoa fanesorana ny fihinanan-kena dia ny fanesorana tanteraka ny ampahany eto an-tany. Any amin'ny faran'ny volana oktobra na ny voalohandohan'ny volana novambra, tokony hokapaina ny tifitra rehetra tsy misy fetra, ary tokony hajanona tsara ny tany ambonin'ilay fototry ny fotony. Azo atao amin'ny savoka na tavoahangy, ny zavatra manan-danja indrindra dia ny manafina azy io mba hiarovana azy amin'ny hafanana. Ny fako amin'io fomba io dia tena tsara dia ho tafavoaka velona amin'ny ranomandry, ary mamoaka loko betsaka amin'ny lohataona, izay hanamboarana ny vokatra.
Mba hiarovana ireo akondro sisa tavela amin'ny vokatry ny hatsiaka dia mila manafina azy ireo ianao. Izany no atao - ny zana-tsipika dia aterina amin'ny tany amin'ny ala manokana, ary ny trano fialofana dia natsangana avy any ambony avy amin'ny fitaovam-pandaminana voajanahary na artifisialy. Mazava ho azy fa ny fomba tsara indrindra hiarovana ny vonom-boly avy amin'ny ranomandry dia ho lanezy tsara. Fa raha tsy mahafaly ny orampanala ny ririnina, dia azo atao ny miaro ny tifitra amin'ny mololo, lagnik na ravina ravina - zandary na kestnut.
Dicentra: fambolena sy fiahiana
Orinasa organika ho an'ny zaridaina
Ahoana ny fomba fananganana tsipìka amin'ny varavarankely - torohevitra mahaliana sy ilaina
Potatoes "Blueberry" - famaritana ny karazany
Reproduction amin'ny lay
Kleshchevina - mitombo avy amin'ny voa, rehefa nambolena tamin'ny zana-ketsa, ny fitsipika fototra amin'ny fambolena
Karazam-bozaka eny amin'ny orkide - inona no tokony hatao?
Ampelikola - mampitombo sy mikarakara
Fambolena fiterahana ao anaty trano fonenana
Fotsy fotsy "Elegantissima"
Ny zana-ketsa voatabiha dia mivadika mavo, inona no tokony hatao - ahoana no hahafantarana ny antony sy hanitsiana haingana ny olana?
Ahoana no hambolena bibikely - ny tsiambaratelo vokatra tsara?
Inona no dinan'ny dinôzôra?
17 fironana kuliana amin'ny 2018: inona no ho eo amin'ny latabatra?
Lalombe avy amin'ny perla
Sakafo kely misy ronono - recipe
Ambasadin'i Belzika ao Okraina
Ny aretina amin'ny bakteria urine amin'ny vehivavy - ny soritr'aretina
Voa maina miaraka amin'ny ovy sy ny hena
Inona no havoaka any Boligaria?
Ahoana ny handravahana lobiana amin'ny tsaramaso ao Géorgie?
Ny Rihanna mahagaga dia miasa amin'ny lahatsary mozika vaovao
Fitiavana eo amin'ny tanana
Lotus tattoo - ny dikany
Fanomezana an-tsitrapo ho an'ny Taombaovao
Loko volomparasy - loko mitovitovy
Hazo tongolobe ao anaty foitra
Sakafo ao anaty sakafo